Sputtering ပစ်မှတ်သည် sputtering sputtering ဖြင့် magnetron sputtering ဖြင့်အလွှာပေါ်တွင်တင်ထားသည့် sputtering source ကိုရည်ညွှန်းသည်။, multi-arc ion plating (သို့) သင့်တော်သောလုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများအောက်တွင်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်ပါးလွှာသောရုပ်ရှင်များကိုဖန်တီးရန်သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများအောက်တွင်အလှဆင်ပစ်ခြင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။, tooling, ဖန်, လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ, semiconductors များ, သံလိုက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း, flat display ပါ, နေရောင်ခြည်ဆဲလ်များ, စသည်တို့. ကွဲပြားခြားနားသောနယ်ပယ်များတွင်လိုအပ်သောပစ်မှတ်ပစ္စည်းများကွဲပြားသည်.
sputtering ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများအားပြင်ဆင်မှုကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲနိုင်သည်: ဖြစ်စဉ်အရ molten casting နှင့်အမှုန့်သတ္တုဗေဒ. သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသည့်အပြင်, သိပ်သည်းဆ, ကောက်နှံအရွယ်အစားနှင့်ပစ္စည်း၏ကြည်လင်မှုအနေအထား, အပူကုသမှုအခြေအနေများနှင့်နောက်ဆက်တွဲဖြေရှင်းနည်းများကိုလည်းတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည်. ထိန်းချုပ်မှု.
ပစ်မှတ်များကိုပြင်ဆင်သောအခါအမှုန့်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်သည်, သော့ချက်၌ရှိသည်: (1) သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအမှုန့်ကိုကုန်ကြမ်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်း; (2) ပန်းတိုင်နှင့် sintering နည်းပညာကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ပစ်မှတ်၏ porosity နိမ့်ခြင်းနှင့် Grain အရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း; (3) ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်မသန့်ရှင်းသောအရာများမိတ်ဆက်ခြင်းကိုတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်သည်.
အရည်ပျော်သွန်းခြင်းနည်းလမ်းသည် sputtering ပစ်မှတ်များပြုလုပ်ရန်အခြေခံနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ingot တွင်ပါဝင်သောအညစ်အကြေးများကိုတတ်နိုင်သမျှနည်းနိုင်သမျှနည်းစေရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။, ၎င်း၏အရည်ကျိုခြင်းနှင့်ပုံသွင်းခြင်းကိုများသောအားဖြင့်လေဟာနယ် (သို့) အကာအကွယ်ရှိသောလေထုအောက်တွင်ပြုလုပ်သည်, ပုံသွင်းစဉ်ကာလအတွင်း, ပစ္စည်းတည်ဆောက်ပုံအတွင်း၌အချို့သော porosity ရှိခြင်းသည်ရှောင်လွှဲမရနိုင်ပေ. ဤချွေးပေါက်များသည် sputtering လုပ်စဉ်အတွင်းအမှုန်များကိုမှောက်စေလိမ့်မည်, ထို့ကြောင့်ပြန့်ကျဲနေသောရုပ်ရှင်၏အရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေသည်, နောက်ဆက်တွဲအပူထုတ်ခြင်းနှင့်အပူကုသမှုဖြစ်စဉ်များသည်၎င်း၏ porosity ကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်သည်.
အကြို: လေဟာနယ်ကို electroplating တွင်ပစ်မှတ်အသုံးပြုခြင်း